Nhoroondo yeGoogle Algorithm Shanduko | Martech Zone
Chipiri, Kurume 20, 2012 Chipiri, Kurume 20, 2012 Douglas Karr
Kana vanhu vandiudza kuti vaive nemumwe munhu SEO yavo saiti sekunge chiitiko chimwe chete, ndinogara ndichi bvunza munhu ari kuita basa. Kugadziridza haisi chirongwa chinotanga nekumira. Makwikwi anogara achichinja, tekinoroji inogara ichichinja, vateereri vari kugara vachichinja… uye Google Algorithm inogara ichichinja Takambotumira zvakatumirwa chete pamusoro Google Panda inochinja - asi iyi infographic yakanyanya kuwanda. Kuramba uri pamusoro peshanduko kuita kushingirira nguva dzose…
Infographic na Kutsvaga kweGoogle company, Outrider.
Tags: google algorithmgoogle algorithm shandukogoogle shanduko
Mar 20, 2012 pa 1: 01 PM
Diki kwazvo kuverenga = /
Mar 20, 2012 pa 1: 08 PM
Mar 20, 2012 pa 2: 04 PM
Pfungwa yakanaka! Tichaisa chinongedzo pairi kuti ugone kuvhura.
Mar 20, 2012 pa 7: 54 PM
Zvakawanda zvirinani izvozvi 🙂 Thanks!
Mar 20, 2012 pa 10: 24 PM
Mar 20, 2012 pa 3: 07 PM
Ini ndakagadzirisa iyo positi Alexandre - kana iwe ukabaya mufananidzo, zvinokutora iwe kunzvimbo yekumusoro sosi ine zoom injini pairi. Kutenda nekuchenesa izvo kuti titarise!
Mar 20, 2012 pa 9: 53 PM
Ndine imwe yako, shamwari: Iwe unofunga kuti musiyano uripakati pePanda neiyo nyowani yekuwedzera-optimization chirango ichave chii? Parizvino, zvinoita kunge dhipatimendi redhipatimendi redundancy uye wese munhu arikutora vhidhiyo yazvino yaMat Cutts paOver-Optimization sezviri pachena havana kutarisa vhidhiyo nekuti kiyi yekuisa mazwi uye zvinyorwa zvakavanzika zvave kukuisa iwe mudambudziko kubva pakaunzwa Google Webmaster - Kuwa 2007 kana ndikarangarira.
Mar 21, 2012 pa 9: 42 AM
Google yakagara ichichinja uye ichiita shanduko, asi zvakajeka 2011 raive gore hombe. Google inoda kupa vashandisi vayo mhinduro dzakanakisa. SeSEOs, zvakakosha kuti isu tizive shanduko idzi dzealgorithm uye nekuchengeta tabo pane edu masaiti.